UMchunu uzithintele kuMagwaza-Msibi | IOL Isolezwe
UMchunu uzithintele kuMagwaza-Msibi
Isolezwe / 19 February 2013, 10:21am / CELANI SIKHAKHANE
uNgqongqoshe wezeMfundo, uMnuz Senzo Mchunu, usolwe yiMeya yaseZululand, uNkk Zanele Magwaza-Msibi, ngokudukisa isizwe ngodaba lwezikole ezakhiwa eZululand wumasipala.
Uhlokoze isidleke seziqandu uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Senzo Mchunu, ngokugxeka iMeya yaseZululand, uNkk Zanele Magwaza-Msibi, ngezikole ezakhela umphakathi.
UkaMagwaza-Msibi ukhiphe isitatimende esivuthayo ezwakalisa ukudumala ngenkulumo kaMchunu ayichaze ngokuthi ikhombisa ukungasiqondi isimo esibhekene nabantu basemakhaya.
UNkk Magwaza-Msibi uthe yena akazisukeli phansi ayokwakha izikole kodwa usuke ecelwe wumphakathi ukuba azofaka isandla kulezo zikole ezisuke zakhiwe wuMnyango kodwa wagcina usuhluleka ukuziqedela ngesikhathi.
“Kungethusile okushiwo nguMchunu ngami ngoba futhi kumveza obala ukuthi akazi lutho ngokwenzeka eMnyangweni wakhe.
“Okokuqala nje kunezikole ezigunyazwe wuMnyango wakhe ezinothisha abakhokhelwa uhulumeni kodwa ezinezakhiwo zodaka, ezinye abafundi bafundela phansi kwezihlahla nokudale ukuthi abantu bakulezo zindawo bangicele ukuba ngifake isandla.
“Ngiyaye ngihambe ngicela iminikelo ezinkampanini ezizimele ukuze sikwazi ukuqhubeka naleso sikole sisakhe sisiqede, sifake nezinsiza ukuze izingane zikwazi ukufundela esimeni esigculisayo. Ngaphandle kwalokho uMnyango kaMchunu uthatha isikhathi eside ukwakha noma ukulungisa isimo sezikole zasemakhaya nokugcina ngokuthi imali ibuyele emuva ingasebenzanga,” kusho uNkk Magwaza-Msibi.
Uthe njengomuntu wasemakhaya uyalwazi usizi lwezikole zakhona yingakho esukumela phezulu uma abazali bemcela ukuba abaseke abakhele izindlu zokufunda kulezo zikole uMnyango osuke uhluleka ukuziqedela.
Eqhuba uthe ngaphambi kokwakha izikole uyaxhumana nabaphathi bezeMfundo besifunda saseZululand akholwa wukuthi bayambikela uNgqongqoshe.
UkaMagwaza-Msibi uthe udumele ukuzwa ukuthi uMchunu unqume ukuba ayokhuluma ngaye komunye umasipala eSisonke ekubeni bekufanele amqonde njengomuntu abanaye kuhulumeni baxoxisane.
Izolo uMchunu ubethula inkontileka ezokwakha amagumbi okufunda esikoleni esingamakhilomitha ayisishiyagalolunye ukusuka eQueen kaMsweli Primary School.
Lesi sikole uNkk Magwaza-Msibi uthe singaphansi kwawo uMnyango kodwa wehlulekile ukuqhubeka naso ngoba izingane zifundela emathinini.
UMchunu ukhalile ngaso wathi abazali bacele ukuba abafundi abakhiphe kuso ayobafaka eQueen kaMsweli ngoba inakho konke okudingwa ngabafundi.
UMchunu utshele abaholi bakamasipala waseMzimkhulu naseSisonke ukuthi uNkk Magwaza-Msibi uvele ayokwakha amagumbi amabili entabeni engayilandelanga nemigudu yomnyango bese ehambe ememezela ukuthi wakhe izikole.